ISinocare iklonyeliswe nge- “Brand of the Year” kuma-10th Healthy The China Awards-News-Sinocare
ISinocare iklonyeliswe ngo- “Brand of the Year” kuma-10th Healthy The China Awards
Isikhathi: 2019-08-16 Hits: 667
Umkhiqizo uyimpahla enkulu engaphatheki yamabhizinisi futhi nobuqotho nedumela eliqongelelwe iminyaka eminingi. Inkampani ivame ukuhlangabezana nochungechunge lwesivivinyo sesikhathi ngaphambi kokuba ibe ngumkhiqizo owaziwayo kusuka kokuncane. Kubalulekile ukuthi izinkampani kufanele zisebenzise ikhwalithi ukudala inani, zithole ukwethembeka ngobuqotho, zisakaze umqondo wohlobo lomkhiqizo ngamasiko, futhi zifeze intuthuko yesikhathi eside ngomoya wokwenza izinto ezintsha.
Muva nje, umkhosi wokukhululwa kwemiklomelo yeshumi ye-Healthy China Awards ye- “Healthy China 2030 Brand Plan”, owawubanjwe ngokubambisana ngu Health News Ihhovisi, www.39.net, Amandla Engqondo, ibibanjelwe eBeijing, eChina. UGao Fu, ongumqondisi we-China Center for Disease Control and Prevention, iphini likamongameli we-Chinese Medical Association kanye nesifundiswa se-Chinese Academy of Sciences, nabanye abantu abayi-9 bathola umklomelo “Womuntu Wonyaka”, kanye no-10 izibhedlela ezinjengePeking Union Medical College Hospital ziklonyeliswe nge “Health Humanities Hospital of the Year”. Izinkampani ezivelele zemithi ezingama-27, ezibandakanya iSinocare, ziwine i- “Brand of the Year”, “Annual Business Citizens” neminye imiklomelo ngokulandelana.
Njengomsebenzi oyisisekelo wokukhethwa kwe- “Healthy China 2030 Brand Plan”, uhlu lokugcina lwemiklomelo yemiklomelo eyishumi ye-Healthy China Awards lwenziwa ngezinqubo eziningi, ezibandakanya I-KPMGUkuhlolisiswa ngokuphelele kokuvotelwa kwayo, ukuphakanyiswa kwedatha enkulu, ukuhlolwa okungekuhle kwemibono yomphakathi nokusakazwa online, ukuhlolwa kokuqala kochwepheshe, ukuphendula ekuhlolweni kabusha komkhiqizo, ukuhlolwa kokugcina kochwepheshe, kanye nokwaziswa emphakathini. "Umkhiqizo Wonyaka", iSinocare ivelele kumakhulu emikhiqizo. Lokhu kungenxa yokuthi ayikhokhi amandla ayo kuphela kwi "Healthy China", kodwa futhi ilwela ukukhishwa kwamandla omkhiqizo waseChina.
U-ZHANG JIJIAO, IPHINI LIKA-MENGAMELI WENYUNYANA YAMAZWE YONKE YESAYENSI YOKUSEBENZA KANYE NOKUQHUBEKA KWABANTU, BEKHIPHA IMIKLOMELO YE-BRAND YONYAKA YONKE
Ngephupho lokuthi "sivumele zonke iziguli ezinesifo sikashukela e-China zibe namamitha azo eglucose egazi", iSinocare yasungulwa ngonyaka we-2002, futhi yaqala nohambo lokukhuthaza imikhiqizo engabizi kakhulu yokuqapha ushukela wegazi nokuthuthukisa imboni yendawo yokunakekela isifo sikashukela eChina. Ngokubambelela kunani eliyinhloko "lokugcina ukuzibophezela kwethu nokuzinikela kwethu kwezempilo", iSinocare izibophezele ekwakhiweni kobuchwepheshe be-biosensing, kuhlose ukucwaninga, ukuthuthukisa, ukukhiqiza nokuthengisa uchungechunge lwemikhiqizo yokuhlola esheshayo yeziguli ezinezifo ezingamahlalakhona nempilo ukunakekelwa ochwepheshe.
Eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule, enezici "zokunemba, ukulula kanye nomnotho", imitha ye-Sinocare yeglucose yegazi ithole udumo kubathengi abaningi baseChina. Kuze kube manje, imikhiqizo yethu isivele yaba uchungechunge oluningi, kufaka phakathi uchungechunge lwe-Safe AQ, uchungechunge lwe-SAFE-ACCU, uchungechunge lwegolide, umsebenzi ophindwe kabili we-EA-11 we-glucose yegazi ne-uric acid meter, imitha yeshukela egazini leselula nohlelo lokuqapha ushukela wegazi ohlakaniphile. E-China, ngaphezu kuka-50% wabantu abanesifo sikashukela abayizifo eziziqaphelayo basebenzisa imikhiqizo yeSinocare.
Ngesikhathi sokuthuthuka okuqhubekayo kwenkampani yethu, iSinocare ngeke ikhohlwe ukuqala kwenhliziyo futhi izondla njalo emphakathini futhi yenze imisebenzi yokupha. Okusemqoka ekubambeni iqhaza kweSinocare emisebenzini yezenhlalakahle yomphakathi ukukhulisa umqondo wezempilo, ukwenza ngcono ukuqwashisa ngokunakekelwa kwabantu kwezempilo nokuvikela impilo yabantu. Ngakho-ke, iSinocare yanda ngenkuthalo emkhakheni wezinsizakalo zezokwelapha zesifo sikashukela, idala imodi ye- "hardware + software + service" futhi isiza abanesifo sikashukela ukuba baqonde futhi baphathe ukuphathwa okuphelele kwesifo sikashukela, ukuqhubekela enhlosweni "yokushintsha indima yethu kusuka ku-popularizer yegazi ama-glucose metres kochwepheshe bokulawulwa kwesifo sikashukela ”
Ikhasi Langaphambili: USinocare uhambele i-2018 Middle Medlab East eDubai
Ikhasi elilandelayo: None